साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीले किन लेखे यस्तो ? - Khabar Break | Khabar Break
साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीले किन लेखे यस्तो ?
हेटौँडा,१८ मंसिर ।
पछिल्लो समय सामजिक सञ्जाल मानिसहरुको अभिब्यक्ति सार्वजनिक गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेको छ । सामजिक सञ्जालको मार्फत विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि आम नागरिक, हरेक क्षेत्रका ब्यक्तिहरुले आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
सामजिक सञ्जालमा अभिब्यक्त भएका धारणाहरु कतिपय अवस्थामा निकै गहन छलफलको विषय बन्ने गरेको छ । अझ केहि विशिष्ट ब्यक्तिहरुको अभिब्यक्तिले कहिलेकाँही राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बहस समेत निर्माण गर्छ ।
मकवानपुरमा पनि कहिलेकाँही सामजिक सञ्जालमा अभिब्यक्त भएका विषयहरु बहसको विषय बन्ने गरेको छ । सामजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण मकवानपुरमा केहि विषयले राम्रो बहसको सृजना गरेको थियो जुन धेरै मात्रामा राजनीतिक विषयबस्तु थिए ।
मकवानपुर जिल्ला साहित्यमा नेपालमानै अग्रणी जिल्लाको रुपमा जाँदै गएको छ । यहा क्रियाशिल साहित्यकार तथा साहित्यीक सस्थाहरुको सक्रियताको कारण साहित्यको लागि मकवानपुरको नाम अग्रस्थानमा आउनेक्रम बढदै गएको छ । साहित्यमा नाम कमाउँदै गएको मकवानपुरमा सहत्यिको लागि समेत सामजिक सञ्जालमा बहस हुनु स्वभाविक विषय नै हो । यहा कतिपय सन्र्दभमा साहित्यीक संघसस्थाको विषयलाई लिएर सामजिक सञ्जालमा निकै तातोतातो बहस हुने गरेको छ ।
यसै क्रममा साहित्यकार रमेश मोहन अधिकारीले यहाको साहित्य सस्था तथा साहित्यकारको लागि सामजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकारी लामो समयबाट मकवानपुरको साहित्यसेवामा लागेको अधिकारीको “स्टाटस” ले मकवानपुरे साहित्य क्षेत्रमा एउटा बहस सृजना गर्ने पक्कापक्की भएको छ । मकवानपुरको सात्यिकारहरुको यहि मंसिर २२ गते शनिबार साहित्य बनभोज कार्यक्रम समेत रहेको अवस्थामा अधिकारीको टिप्पणीमाथि बहस हुने संभावना बढेको छ ।
अधिकारीले सामजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत अब मकवानपुरमा केही नयाँ सुरूआत गर्नुपर्छ भन्दै चार वटा बुँदामा आफ्ना अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि बहस हुने पक्का भएको हो ।
उनले यस्तो विषय उठान गरेका छन् ।
१. मकवानपुरमा क्रियाशील सबै साहित्यिक संस्थाका अध्यक्ष र सचिव पदेन सदस्य रहने गरी साहित्य सञ्जाल मकवानपुर गठन वा पुनर्गठन गर्ने । खुब खट्छु भन्ने व्यक्तित्वलाई वा खटेर देखाइसकेका व्यक्तित्वलाई वा इच्छुक व्यक्तित्वलाई अध्यक्ष बनाउने
२. मकवानपुरका साहित्यकारहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने
३. मकवानपुरका सबै कृतिकार, कृति ननिकालेका तर निरन्तर लेखिरहेका साहित्यकारहरूका विधागत कृति, योगदान तथा दखल देखिने प्रकारको पुस्तक प्रकाशन गर्ने
४. साहित्यकार, साहित्यानुरागी तथा साहित्यसेवी समेटिने गरी साहित्यकार हित बचत तथा रिन सहकारी संस्था खोल्ने ।।
मकवानपुरे साहित्यलाई जरैबाट बुझेका अधिकारीको यो भनाईले मकवानपुरे साहित्यमा एउटा नयाँ अभ्यासको शुभारम्भ समेत गर्न सक्ने एक साहित्यकारको भनाई छ । उनी भन्छन ः अधिकारी केहि गहन विषयबस्तु नभै बोल्ने ब्यक्ति हैनन्, उनले यो विषय धेरै अध्ययन गरेरनै लेखेको हुनुपर्छ ।
अधिकारीले स्टाटस पोष्ट गरेपछि साहित्यकार तथा पत्रकारहरुको प्रतिक्रिया आउन थालिसकेको छ ।
नेपालमा थप तीन जनामा देखियो कोरोना भाईरस, संख्या ९ पुग्यो
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै,लकडाउनको विषयमा छलफल हुने